Edumile emhlabeni French umdwebi, printmaker kanye umdwebi Fransua Bushe wazalwa ngo-dolobha French ngo-September 1703. Walandela ku ezinyathelweni zikayise, ngiziphilisa ngokudweba amaphetheni ngoba efekethisiwe kanye yezicathulo, futhi kusukela zisencane kwamsiza studio, okubonisa ithalente e ezobuciko. Ubaba wakuphawula lokhu, walinika ukutadisha kudlala womqophi abadumile Jean Kars.
Ukuqala ukuphila ezimele avunyelwe uFrancois ukuthola imali ngomsebenzi wawo siqu ukuze uthole oxhumana ewusizo namaklayenti senior uthisha wakhe.
Ngo 1720, Bush prodozhil ukuqeqeshwa ngesikhathi abadumile ngesikhathi master muralist Lemoine, futhi kusukela 1722 wafunda ubuciko design mikhondo namabhuku usebenzisa izimfundiso Jean-François Kara amadala kakade.
Umsebenzi wokuqala ezinkulu umdwebi wangena 1722 lapho wabelwa ukudala imifanekiso uhlelo olusha umsebenzi Gabrielya Danielya "umlando French". 1723 waletha umklomelo umculi: Ukudweba Fransua Bushe "u-Evili-Merodaki, indodana nendlalifa sikaNebukadinesari, inkosi exempting ekugqilazweni Joachim" Wavula ithalenta umdwebi umphakathi.
iholide Italian futhi ukubuya okunqobayo
Ngo 1727, Bush wathumela e-Italy ukuze uthuthukise ulwazi futhi kangcono ukubheka imisebenzi amakhosi adumile izikebhe zabo.
nethonya elikhulu umsebenzi umculi kwaba Giovanni Lanfranco futhi Pietro da Cortona. Fransua Bushe, ogama imidwebo aziwa abalandeli eziningi Rococo, kuhlelwe imisebenzi namasiko athile lasetjentiswako imidwebo, ngokukhetha efaneleka kakhulu uhlamvu isitayela.
Emuva ngo-1731 e-Italy, umculi baba nembangi ubulungu Royal Academy emnyangweni yokudweba zomlando. Ngemva kweminyaka engu-3, sibonga ifilimu "uRinaldo futhi Armida", ekugcineni evunyiwe njengoba ilungu Academy. Esikhathini esifanayo, Bush wayesebenza esikhumulweni manufactory ka Beauvais.
30s futhi 40s of umdwebi XVIII leminyaka baletha oda eziningi ezisemthethweni ze ezindlini ababethi Versailles, ikakhulu ezindlini the Dauphin, efulethini elincane, igumbi indlovukazi.
Wabuye ngesineke amahholo Royal Library. I azibeke ezinhle uLouis XV futhi indlovukazi yakhe - lo Marquise de Pompadour, Bush eyalwa ukuhlobisa zabo zokuhlala mansions we eseduze ukuba izikhulu enkantolo.
Yini ebhala Fransua Bushe
izigcawu engokomfanekiso futhi basezinganekwaneni - omunye izihloko ozithandayo ngoba Fransua Bushe. yobuciko kuhluke umusa, kumnandi okubabayo kanye gqamisa ezithile, egcizelela umcondvo lobalulekile kuwebhu. Futhi, kaningi umculi wakhetha imidwebo yakhe ye izigcawu kusukela esigodini, futhi ngokuphambene ukuphila ezisemadolobheni: ezifana Fairs, imikhosi, nokuphila imfashini ye baseParis ocebile.
Ukuphishekela ubuhle nokukhuthala ukuthi ukubeka Bush ngemisebenzi yakhe, wamvumela ukuba abe inhloko yabangamashumi Gobelins manufactory e 1755. Wayesebenza nezithelo kakhulu: mikhondo eziningi, nezindawo zemidlalo kanye opera, abalandeli ngesineke, abafana, Ornamental Umdwebo zobumba, imidwebo kuya Royal Awemifekethiso Factory yomndeni kanye, yebo, imifanekiso owaziwa ncwadi Boccaccio, Ovid futhi Moliere baletha udumo olumfanele Fransua Bushe. yobuciko agcinwa iminyuziyamu eminingi emhlabeni wonke: i-Louvre, Palais Potit Museum, Lyon Museum of Fine Arts, Petersburg State Hermitage Museum, National Yobuciko eLondon Madrid Prado Museum nabanye abaningi.
Isitayela olukhethekile umculi, libhekene intuthuko, pretentiousness, isifiso ukuze ubalekele ukubhekana namaqiniso, njalo ikhanga izivakashi kumamyuziyamu.
Azi kahle kamhlophe izimilo ukhomba ngophakathi waseParis labangela ukuqala komkhakha, Bush nokho wazama ukufihla izifiso zabo kweqiniso futhi ngikwazi ukuthenga ugwayi notshwala sabantu cowherd abavamile yasemakhaya.
Fransua Bushe: imidwebo
Ngo-1765, Bush waba "umdwebi wokuqala enkosini," futhi waqokwa umqondisi we-Royal Academy of Painting kanye Ukuqopha.
Lena, mhlawumbe, intaba ephakeme kunazo zonke kwenkonzo yakhe, ngubani amaphupho ukuba anqobe abaculi bangaleso sikhathi.
1770 eyanikelwa umculi omunye zobungoma - ubulungu zokuhlonipha ngesikhathi Petersburg Academy of Arts.
Imidwebo Fransua Bushe anamagama ukuthi ukudalula ngokugcwele okuqukethwe zabo ukuze anqobe ubumsulwa ibulawa ngesihluku futhi ngendlela ekhethekile, lamanje namanje eminyakeni yokuqala yomsebenzi umdwebi sika.
Phakathi imisebenzi edume kunazo umdwebi ukunikeza imisebenzi efana "Pygmalion futhi Galatea," "Love Letter," "i-Jupiter ne-Callisto", "Kudlwengulwa Europa", "Nokunqoba Venus," "Hercules futhi Omphale".
umdali Omkhulu efa eneminyaka engu-67 ngo-May 1770. Imemori ye Bushe Fransua, izithombe, imidwebo, yezicathulo kanye emincanyana okuyinto waphefumulela isizukulwane abaculi abasha, washiya uphawu abalulekile emlandweni ezobuciko kwekhulu XVIII, Kuyoze kube bahlala izinhliziyo abalandeli ithalente lakhe.
Deyneka Aleksandr - umculi isitayela omkhulukazi
Albert Marquet. Biography kanye umsebenzi umdwebi
Umklamo kwekhulu lama-20: izakhiwo yesimanje
Ultrasound Screening 1 yokuthathu: kulungiswa imiphumela. is ultrasound ukuhlolwa kanjani 1 yokuthathu?
Yini amavithamini e cherry elimnandi kakhulu wusizo empilweni yabesifazane?
Isipho esihle kakhulu kwengane - umthamo wokudansa wabantwana abaneminyaka engama-6 ubudala
Geotextile: isicelo kuleli zwe, indawo, ukubuyekezwa
Karina Razumovskaya: Filmography nokuphila actress komuntu siqu
Rafting phezu Vishera. Nethezeka ku Perm esifundeni. Vishera River, Perm Krai
Ubuhlobo komzali nengane: yini okufanele kube?
Uhlelo ngokubhala umculo kukhompyutha ngesiRashiya. Uhlelo engcono bhala umculo